Official Website of CA Member Rabindra Adhikari – किन हुन सकेन विकास ?
‹ PreviousNext ›	किन हुन सकेन विकास ?
रबीन्द्र अधिकारी व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति हुन्
दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित नेपालमा विकासका सन्दर्भमा निकै ठुल्ठूला बहस र चर्चा परिचर्चा भएका छन् । विगतमा राजाले देशलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेदेखि लिएर विकासको मूल फुटाऊँ भन्नेसम्मका नारा लिएर विकासका हल्लाखल्ला गरे । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले पनि विकास, विकास भनिरहे र अझै भन्दै पनि छन् । तैपनि, हाम्रो देशमा खासै विकास भएको देखिन्न । यसका पछाडि पक्कै पनि केही न केही कारण त छन् नै । यस आलेखमा तिनै कारण केलाउने जमर्को गरिएको छ ।
भूराजनीतिअनुकूल विकास मोडल बन्न नसक्नु
हाम्रो देश नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको छ, त्यसलाई आत्मसात् गरेर हामीले विकासका मोडल तय गर्न सकेनौँ । हामीले छिमेकी भारतसितको निर्भरतालाई घटाउँदै जानुको साटो उल्टो बढाइरह्यौँ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि हामी खुम्चिरह्यौँ । अर्थात् हामीले आफूलाई विशाल दुई छिमेकीको घेराबाट बाहिर फैलाउने कोसिस गरेनौँ । हामीले राष्ट्रिय एकताको मुद्दालाई बलियो बनाउन सकेनौँ । जसले गर्दा हामीमा व्यापारदेखि अन्य विकास निर्माणका कार्यमा बाहिरी प्रभाव रहिरह्यो । छिमेकी भारत हाम्रो विकासमा त्यति सकारात्मक हुन सकेन । यसले पनि हाम्रो मुलुकको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो । जलस्रोतको धनी देश भन्दाभन्दै पनि हामीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आफैँले केही गर्न सकेनौँ । हामीले गर्न नसकिरहेको समयमा त्यसैअनुरूप हाम्रो छिमेकी पनि सहयोगी बनिदिन सकेनन् । जसले गर्दा भूपरिवेष्टत देश नेपाल उत्तर र दक्षिणतर्फ फैलिन सकेन । खासगरी सुगौली सन्धिपछिको हाम्रो राजनीतिक परिवेश कुनै न कुनै रूपमा हामी भारतको छायामा छौँ र रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर अगाडि आयो । हामीमै त्यस्तो मानसिकता विकसित भइसकेपछि भारतले पनि त्यसैअनुरूप व्यवहार गर्नु नौलो भएन । त्यसैले पनि हाम्रो देशको विकास अघि बढ्न सकेन ।
हाम्रो राजनीतिक कमजोरी
यथार्थमा राजनीति केका लागि भन्ने प्रश्नमाथि हामीकहाँ खासै विचार विमर्श भएन । यथार्थमा राजनीति विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ । राजनीति मुलुक परिवर्तन र स्वतन्त्रताका लागि हुनुपर्छ । हामीले लामो समय राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि खर्च गर्‍यौँ । राणाशासन र पञ्चायतभरि स्वतन्त्रताका लागि लड्यौँ । पछि प्रजातन्त्रकालमा पनि गणतन्त्रका लागि लड्यौँ । यस्ता राजनीतिक संघर्षका अनेकन् शृंखला हामीले पार गर्‍यौँ । हाम्रा बढीभन्दा बढी मुद्दा राजनीतिसित जोडिए । हाम्रा राजनीतिक दलहरू पनि तिनै मुद्दामा केन्द्रित भए । राजाहरूले देशमा विकास गर्‍यौँ त भन्थे । तर, उनीहरू व्यक्तिगत सोख र भोगविलासमा लिप्त भए । उनीहरू आफ्नो सत्ता जोगाउने विषयमा मात्र केन्द्रित देखिए । विकास निर्माण उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।
त्यसैले हाम्रो देशको राजनीति कहिल्यै विकासमुखी हुन सकेन । देशको समृद्धि र जनताको समृद्ध जीवनका लागि हाम्रो राजनीतिले खासै सोचेन । खालि राजनीतिको विकासमा मात्र राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भयो । हाम्रो राजनीतिले देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउन सक्ने नेता, मुलुकको विकासको अगुवाइ गर्न सक्ने कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, त्यसअनुसारको ‘ओरियन्टेसन’, विचार, जनचेतना आदि दिनै सकेन । यसले गर्दा हामी ठीक बाटो हिँड्न सकेनौँ ।
हाम्रो देशमा विकास नहुनुको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता पनि जिम्मेवार छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा अत्यन्तै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र एउटाले सुरु गरेको काम अर्काले रोकिदिने होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । यसले गर्दा हामी सबैको ध्यान राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित भयो । हाम्रो शिक्षाले पनि विकास र समृद्धिलाई डोर्‍याउन सकेन । हाम्रो र शिक्षा र राजनीतिले उद्यमशीलताको विकास गर्नै सकेन । जागिरको मात्रै खोजी गर्ने उद्यमशीलताको विकासमा चासो नदिने शिक्षाले देशको विकास गर्न सक्दैन ।
हामी सबै निर्वाहमुखी सोचबाट माथि उठ्न सकेनौँ । सबैलाई खान, लाउन पुगेकै छ भने मरिलानु के नै छ र भन्ने सोच हामीमा विकास भयो । हामीमा ठूला अपेक्षा पैदा नै भएनन् । हाम्रा अपेक्षा साँघुरा घेराभित्रै कैद भए । जसले गर्दा हामी अघि जान सकेनौँ । हामीमाझ ठूला संकट पनि आइपरेनन् । हामीले नयाँ–नयाँ र कठिन समस्या खासै ‘फेस’ गर्नुपरेन । जसले गर्दा हामीले नयाँ दिशामा जाने कठोरतम निर्णय लिनुपर्ने अवस्था पनि आइपरेन । हाम्रो निर्वाहमुखी सोचले निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्‍यो । त्यसैले गर्दा हाम्रो विकास र समृद्धिका सपना पनि निर्वाहमुखी घेराबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । हाम्रा सम्पूर्ण सपना पानीका फोका साबित भए ।
कमजोर सरकार र कमजोर ब्युरोक्रेसी
मुलुक विकासका निम्ति सरकार र ब्युरोक्रेसी बलियो हुनुपर्छ । तर, हाम्रो सरकार र ब्युरोक्रेसी जुन रूपमा जति बलियो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेन । कुनै पनि देशको विकासका लागि सरकार र ब्युरोक्रेसी बलियो हुनुपर्छ । नियम, कानुन र व्यवस्था पनि विकासमैत्री हुनुपर्छ । तर, देशका नियम, कानुन विकासमैत्री हुन नसक्दा हाम्रो देशको विकास कानुनी झमेलामा अल्झिरह्यो । हामीले आफैँलाई अल्झाएर आफ्नै देशको विकास रोकिरहेका छौँ । विकास निर्माण कार्यसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायबीच समन्वयको पनि अभाव छ ।
आफूआफूमै समन्वय गर्न नसकेर पनि हामी अघि जान सकिरहेका छैनौँ । हामीले वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ त भन्दै आएका छौँ, तर त्यसका लागि भरपर्दो वातावरण बनाउन भने सकेका छैनौँ । देशको विकासका लागि निजी क्षेत्र पनि इमानदार हुन सकेको छैन । हामी सबै शंकैशंकामा हिँडिरहेका छौँ । क्षणिक लाभ–हानिमा रमाउने, शंकैशंकामा दौडिने प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रो विकास ओझेलमा परिरहेकोमा शंका छैन । विकासका लागि प्रस्ट भिजन, व्यवस्थापन र योजना चाहिन्छ । अनि, त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न डिपिआर आवश्यक हुन्छ । तर, हामीले त्यो सब गर्नै सकेनौँ ।
कमजोर औद्योगिक विकास
औद्योगिक विकासको एउटा चरण पार गर्नुपर्नेमा हामीले त्यो गर्न सकेनौँ । त्यसका लागि सरकारी नीति नै बाधक थियो । हाम्रा औद्योगिक उत्पादन बाहिरी बजारमा सजिलै जान सक्दैनन् । त्यसका लागि सन् १९५० लगायतका सन्धि बाधक छन् । यस्तोमा आफैँले आफ्ना उत्पादनको संरक्षण गर्ने हिसाबले औद्योगिक विकास गर्ने बाटोमा हामी जान सकेनौँ ।
प्रविधि विकास र उपयोगमा पछाडि
कुनै पनि देशको विकासमा प्राविधिक विकास र त्यसको उपयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसका लागि सूचना प्रविधिको समुचित विकास आवश्यक हुन्छ । यसलाई हामीले सही समयमा उपयुक्त ढंगबाट सदुपयोग गर्न सकेनौँ । हामीले भरपर्दो पूर्वाधार विकास गरेर त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनौँ । यसलाई व्यापारिक उद्देश्यले हामीले अघि लान सकेनौँ, खालि सुविधाका हिसाबले उपयोग गर्‍यौँ । हाम्रो देशमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता विकासका पर्याप्त सम्भावना छन् । हामीले आफ्नै उपभोगका लागि समेत पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ । व्यावसायिक उत्पादन त टाढाको विषय भयो । कृषिमा व्यावसायिकता ल्याउन पनि हामीले सकिरहेका छैनौँ । पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले खासै धेरै गर्न सकेका छैनौँ ।
भएका केही विकास
हाम्रो देशमा विकास हुँदै भएन भन्ने होइन । सामाजिक जागरण र चेतनाको हिसाबबाट कतिपय ‘इन्डिकेटर’ चाहिँ विकसित देशलाई समेत उछिन्ने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । ‘पर क्यापिटा इनकम’ का आधारमा हामी विकासमा निकै पछि छौँ । तर, ह्याप्पिनेस, डेमोक्रेसी, मानव अधिकार आदिका हिसाबबाट हेर्दा भने हामीकहाँ पक्कै धेरै विकास भएको छ । महिला अधिकार र समावेशिताका क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो विकास भएको छ । तर, त्यस्ता विकास निर्माणमा टेकेर त्यसभन्दा अघि जाने र दुनियाँसित प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्दर्भमा भने हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले हामीकहाँ आजसम्म गणनायोग्य विकास हुन नसकेको हो ।
यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकासित छ Monday, January 9th, 2017	| Categories: Articles	| Leaveacomment
Recent Activities	कास्की मतदातालाई बिशेष आभार
स्थानीय चुनाब पछिल्लो अपडेट (लाइभ भिडियो)
स्थानीय तहको निर्वाचन र एमाले
अन्य पार्टीतर्फ मनै जाँदैन ! कस्तो राम्रो भावना (भिडियो)
स्मृतिमा विनासकारी भूकम्प
Latest Video	More About CPN-UML	Follow us On Twitter	RabindraADH@RabindraADH	अाखिर सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गर्यो !! https://t.co/wLzJ1Fb2Nk	2h ago	RabindraADH@RabindraADH	आदरणीय आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु
कास्कीको एक जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले कास्केली जनताहरु सँग...
https://t.co/BF29j5KNvV	3h ago	Interviews	राजनीति, प्रशासन, ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्टबीच सेटिङ छ: रविन्द्र अधिकारी रवीन्द्र अधिकारीले नबिर्सिने आन्दोलन
मन परेको किताब रातभरि पढ्छु
‘राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्र कुनै पनि विकासमैत्री छैनन्’
China wants friendship with Nepal, but not at the cost of ties with India
Audios	शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरौंं। जनताको बहुदलीय जनबादको मार्गदर्शनमा समृद्द नेपाल निर्माण गरौंं।। Album